महिलाले श्रीमानसँग लुकाउने चार कुरा
२०७५ बैशाख १५ शनिबार | प्रकाशित ११:४९:२१
विवाहपछि पति र पत्नी आपसमा जोडिन्छन् । उनीहरुको सुखदुख सबै जोडिन्छ । एउटालाई दुख हुँदा अर्कोलाई दुख्छ । एउटाको खुसीका अर्को रमाउछन् । पति पत्नी भनेकै एकसाथ जीवनभर साथ दिनका लागि हो । भनिन्छ, पति पत्नीबीच केही कुरा लुकाइदैन । दुबैले एकअर्कालाई केयर र शेयर गर्नुपर्छ । तर सबै कुरा शेयर गर्न सकिने खालका हुँदैन । विवाहपछि पनि कतिपय कुरा पत्नीले लुकाएर राख्छन् । के कुरा उनीहरुले लुकाउछ त ?
१. पूर्व ब्वाइफ्रेन्डको कुरा
अपवादबाहेकको अवस्थामा विवाहित महिलाहरुले आफ्ना पूर्व प्रेमीको कुरा पतिलाई सुनाउदैनन् । उमेर पुगेपछि जो कोही प्रेम अफेयरमा रमाउन सक्छन् । तर जोसँग प्रेम हुन्छ उसैसँग बिहे हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा आफ्ना पतिलाई कुनैपनि पत्नीले ब्वाइफ्रेन्डको कुरा सुनाउँदैनन् ।
२. सासुसँगको ठाकठुक
हरेकजसो घरमा सासु र बुहारीबीच नोंकझोक भइरहेकै हुन्छ । सासुहरु बुहारीमाथि हावी हुन खोजिरहेका हुन्छन् भने बुहारीहरु सासुको एकाधिकार तोड्ने प्रयासमा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरु एकअर्कालाई गलाउने कोशिसमा हुन्छन् । तर सासुको बारेमा अक्सर महिलाले आफ्ना पतिसँग कुनै कुरा गर्दैनन् ।
३. माइतको दुख
माइतको कुकुर पनि प्यारो भन्ने गरिन्छ । हरेक विवाहित महिलाको लागि आफ्नो मइत असाध्यै प्यारो लाग्छ । उनीहरुलाई आफ्नो घरभन्दा माइतको बढी चासो हुन्छ । माइतको राम्रो कुरा बढाइचढाइ भन्ने महिलाहरुले माइतको दुर्दशा भने लुकाउने गर्छन् । माइतको ऋण, अभाव, गरिवी जस्ता कुरालाई पतिसँग शेयर गर्दैनन् ।
४. यौन इच्छाको कुरा
पुरुषलाई जस्तै महिलालाई पनि यौनमा इच्छा हुन्छ । उनीहरुलाई यौन सम्बन्ध बनाउन मन लाग्छ । तर यस्तो कुरा उनीहरु व्यक्त गर्दैनन् । आफुमा यौनइच्छा जागेपनि त्यसलाई दबाएर राख्छन् । जबकी पुरुषहरु यस्तो कुरामा कति पनि अप्ठ्यारो मान्दैनन् ।